နှစ်သစ်အစမှာ အနုပညာညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တဲ့ ကိုလူချောအဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူ ရိုက်ကူးရေးတွေ လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ယုန်လေး – Cele Top Stars
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ယုန်လေးကတော့ အနုပညာအပေါ် ချစ်ပြီးအနုပညာလမ်းမှာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ တက်သစ်လူငယ်တွေကို ကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ဒုက္ခရောက်သူတိုင်းကို အမြဲ တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးတတ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းလွန်းတဲ့ ပရဟိတစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာမောင်နှမတွေအပြင် ပရိသတ်တွေကပါ လေးစားချစ်ခင်နေကြရတာပါ။
သီချင်းသစ်တွေမှာလည်း တက်သစ်စလူငယ်တွေကို တွဲခေါ်ကာ မြေတောင်မြှောက်ပေးလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကိုသာမက ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ထိပ်ဆုံးကလုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦးပါ။ အမြဲပျော်​ပျော်နေတတ်ပြီး မသိလို့အမှားတွေပြုလုပ်ခဲ့ရင်လည်း ပရိသတိတွေကျေနပ်လောက်တဲ့ထိ တောင်းပန်တတ်တဲ့ ရိုးသားတဲ့အနုပညယရှင်တစ်ဦးပါပဲနော်။
လက်ရှိမှာတော့ ” မနေ့က ၁ရက်နေ့ နှစ်သစ်မှာ အလုပ်လေး နဲ့ စဖြစ်တယ် . ကိုလူချောတွေလည်း အများကြီးပါတယ်။အကုန် အလုပ်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ အလုပ်အပ်ပြီး
ဆန် နွေ ဆီ နှင့်လိုအပ်သည်များကိုလှူပေးတဲ့ Steel Dragon မိသားစုကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သတင်းကောင်းလေးကိုဝေမျှခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ချစ် ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
ခဈြပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော သရုပျဆောငျ ယုနျလေးကတော့ အနုပညာအပျေါ ခဈြပွီးအနုပညာလမျးမှာ လြှောကျလှမျးဖို့ ခကျခဲနတေဲ့ တကျသဈလူငယျတှကေို ကူညီပံ့ပိုးနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပါ။ ဒုက်ခရောကျသူတိုငျးကို အမွဲ တတျနိုငျသလောကျ အကူအညီပေးတတျတဲ့ စိတျထားကောငျးလှနျးတဲ့ ပရဟိတစိတျအပွညျ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အနုပညာမောငျနှမတှအေပွငျ ပရိသတျတှကေပါ လေးစားခဈြခငျနကွေရတာပါ။
သီခငျြးသဈတှမှောလညျး တကျသဈစလူငယျတှကေို တှဲချေါကာ မွတေောငျမွှောကျပေးလရှေိ့သူဖွဈပါတယျ။အနုပညာအလုပျတှကေိုသာမက ပရဟိတလုပျငနျးတှကေိုလညျး ထိပျဆုံးကလုပျဆောငျနသေူတဈဦးပါ။ အမွဲပြျော​ပြျောနတေတျပွီး မသိလို့အမှားတှပွေုလုပျခဲ့ရငျလညျး ပရိသတိတှကေနြေပျလောကျတဲ့ထိ တောငျးပနျတတျတဲ့ ရိုးသားတဲ့အနုပညယရှငျတဈဦးပါပဲနျော။
လကျရှိမှာတော့ ” မနကေ့ ၁ရကျနေ့ နှဈသဈမှာ အလုပျလေး နဲ့ စဖွဈတယျ . ကိုလူခြောတှလေညျး အမြားကွီးပါတယျ။အကုနျ အလုပျကို ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွဈလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ ။ယုံယုံကွညျကွညျ နဲ့ ရိုကျကူးဖို့ အလုပျအပျပွီး
ဆနျ နှေ ဆီ နှငျ့လိုအပျသညျမြားကိုလှူပေးတဲ့ Steel Dragon မိသားစုကိုလညျး အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ ။”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သတငျးကောငျးလေးကိုဝမြှေခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ခဈြ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…။